Baarlamaanka Puntland oo kala diray golaha wasiiradda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBaarlamaanka Puntland oo kala diray golaha wasiiradda
Baarlamaanka Puntland. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Talaado kala diray golihii wasiiradda kadib markii ay u codeeyeen in shaqada laga ceyrsho.
Qiyaastii 47 xildhibaan ayaa u codeeyay in la kala diro golaha wasiiradda oo ay ku eedeeyeen shaqo xumo, guddoomiyaha baarlamaanka Puntand Axmed Cali Xaashi ayaa iclaamiyay.
Baarlamaanka Puntland ayaa ka doodayay mooshinka cod kala noqoshada ka dhanka ah golaha wasiiradda labadii beri ee la soo dhaafay.
Madaxweynaha ayaa haysta 21 beri si uu u soo dhiso gole wasiiro cusub, sida uu sheeayo dastuurka Puntland.
Marka loo fiiriyo qodobka 67-aad ee dastuurka Puntland, si loo kala diro golaha wasiiradda labbo meelood saddex saddex meel oo kamid ah 66 xildhibaan ayaa loo baahanyahay si mooshinku uu u meelmaro.
December 7, 2017 Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay miisaaniyada 2018
Puntland lawmakers dissolves cabinet ministers
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyaha Ciidanka Turkiga Janaraal Hulusi Akar ayaa maanta oo Jimce ah yimid Muqdisho, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda ee Radio Muqdisho. Hulusi ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee Aadan Cade ku soo [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa dhameeyay qalabaynta saldhigiisii ugu horeeyay ee Afrika oo uu ka dhistay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Saldhiga ayaa martigelin doona saraakiisha Turkiga si ay u tababaraan askarta Soomaalida iyo ciidamada dagaalka kula [...]